Trump kwara m emo maka 'Parasite', Brad Pitt Oscar meriri - ndị mmadụ - TELES RELAY
Na mbọ ọ na-agba mgbe niile ịkpalite agha ọdịnala, Onye isi ala Donald Trump nwara ịfụ ndị na-akwado ya na ngagharị iwe na Colorado na mgbede Tọzdee site na ịkatọ Hollywood maka inye Oscars ihe nkiri South Korea “Parasite” na Brad. Pitt.
"Site n'ụzọ, kedụ ka ihe omume Academy Awards si mee n'afọ a?" Onye meriri bụ fim sitere na South Korea, "Trump nke" Parasite kwuru, "ihe nkiri asụsụ mba ọzọ mbụ iji merie Oscar maka ọmarịcha foto.
Na vidiyo nke onye ntaakụkọ Vox Aaron Rupar kesara, Trump kwara igwe mmadụ mmadụ ahụ mgbe ọ sịrị, "Gịnị bụ ihe ahụ? Anyị nwere nsogbu zuru oke na South Korea, na azụmaahịa. Ma emesịa ha niile, ha na-enye ha ihe nkiri kachasị mma nke afọ? "
ASSET: "Site n'ụzọ, kedụ njọ ndị Oscars n'afọ a?" (Iwepu akwụkwọ ya) 'Onye mmeri bụ fim si South Korea!' Gịnị ka o mere? Anyị enweela nsogbu azụmaahịa zuru oke na South Korea. "
Mgbe ahụ ọ na-akpọ Brad Pitt ugboro ugboro "nwa obere amamihe." pic.twitter.com/sAEWlrKr0T
- Aaron Rupar (@rrupar) February 21 2020
A nwekwara ike ịnụ onye isi ala ahụ ka ọ na-ekwu, sị: "Anyị enwere ike weghachite" Mee ka ikuku "?" O kwukwara okwu nzuzu banyere "Sunset Boulevard".
Onye mmeri kacha mma na 1940 gwara "The Wic saga" of the South Scarlett O'Hara mara mma, onye na-agbasi mbọ ike ịchekwa ahịhịa ya n'oge agha obodo na mgbe ọ gachara. Ọ bụ ezie na "Ifufe Ikuku" bụ otu n'ime ihe nkiri America kachasị, a na-ebelata aha ya n'ihi nnọchi anya ya na ndị nnọchi anya agbụrụ nke Africa-America. Ka ọ dị ugbu a, "Sunset Boulevard" bụ ihe nkiri gbara ọchịchịrị ma na-atọ ọchị nke 1950 banyere ihe nkiri ịka nká na onye aghụghọ na-adịghị mma Norma Desmond na-akpa nkata nlọghachi ya.
Mgbe ahụ Trump wakporo Pitt, ikekwe n'ihi na onye omee jiri akụkụ nke okwu nnabata nke Oscar ya na-akatọ ndị otu Republicans maka ịhapụ ịkpọ ndị akaebe n'oge ikpe ncheta Trump. Pitt meriri Onyinye Nkwado Onye Mmekọ kacha mma maka "N'otu oge, na Hollywood".
Trump kpọrọ Pitt "nwa obere amamihe," azịza nke kpaliri otu ìgwè nke ndị otu ya na Colorado.
Trump kwukwara na "I gha enwetala Brad Pitt." "Abụghị m nnukwu onye na-akwado ya. O biliri ọtọ kwuo ntakịrị okwu. Nwoke mara ihe. Ọ bụ obere nwa nwoke maara ihe. "
Mgbe Pit na onye isi "Parasite" Bong Joon Ho enwebeghị azịza maka mkparị Trump, Neon, onye mgbasa ozi South Korea jiri nzaghachi tweet na-ekwu okwu na-ezo aka n'eziokwu na fim ahụ na-abịa. ndepụta okwu maka ndị na-asụ asụsụ Korea.
Tọkịdịrị kwuru, "enweghị nghọta, ọ gụrụ agụ," #Parasite #BestPicture # Bong2020 ".
Onweghi nghọta, o gaghi agu akwukwo.#Parasite Ihe ngosi #Best # Bong2020 https://t.co/lNqGJkUrDP
Ndị ọzọ na Twitter ekwuola na Trump na-eche ncheta banyere "Ekpuchie ya na Ifufe."
Max Boot, onye nyocha ndọrọ ndọrọ ọchịchị CNN na onye Republican ogologo oge hapụrụ onye na-azọ ọchịchị na ntuli aka Trump, tweeted: "Trump na-ekwusi okwu ike banyere South Korea karịa North Korea. N’ezie, o nwere mmasị na ndị otu Confederate Grant with the Wind. Nnukwu mkpughe. "
Prọfesọ nke sayensị ndọrọ ndọrọ ọchịchị na Mahadum Mba nke Pusan, Robert E Kelly wee sị m: “Akụkụ kacha agbasa ozi bụ na Trump rịọrọ maka Gone With the Wind. Ntuliaka, ịgba ohu, mmeme nke Old South. Ee. Trump bụ n'ezie ebumnuche kachasị njọ nke ndị mebere ya. "
"Na Wind mebiri, isi ihe ndị sonyere na Ku Klux Klan," onye edemede mara ederede tweet Jennifer Wright.
Na Wind na ikuku, ndị isi na-esonyere Ku Klux Klan n'ụzọ nkịtị. https://t.co/10JssnbE8l
- Jennifer Wright (@JenAshleyWright) February 21 2020
Onye ọrụ Twitter ọzọ rụtụrụ aka na ndị mmadụ na-egwuri egwu ma mee ka onye ọ hụrụ n'anya "Gone With the Wind" na "Sunset Boulevard" bụcha ndị ọrụ "ndị mba ọzọ".
Ọ na-eche "Ekwesiri Ifufe" na "Sunset Boulevard" ọzọ. N'ihi: America ma ọ bụ ihe.
Onye choro igwa ya na Vivian Leigh, Olivia de Havilland, Leslie Howard bu ndi oru ozo; Billy Wilder bụ onye mba ọzọ?
- ALLISON ADATO (@editgirlnyc) February 21 2020
Ka ọ dị ugbu a, onye ọzọ tụgharịrị uche ma nyochaa nyocha nke "Parasite" nke enweghị oke ego na South Korea na ụwa, maọbụ ọ chere na nkata ahụ. dị nso na akụkọ ntolite nke ezinụlọ ya.
Amamiihe! Win merie Twitter taa !!
- Javelina Blue (@JavelinaBlue) February 21 2020
Banyere nkatọ Trump banyere Pitt, ndị na-akwado ihe nkiri ahụ chere na ọ na-ebu ụzọ agha mwakpo Onye isi ahụ.
Ọ bụrụ na ị nwere nhọrọ n’ichekwa @realDonaldTrump et #Brad Pitt site n'ụlọ na-ere ọkụ, olee ebe mụ na Brad nwere nkụ? pic.twitter.com/hrY4zdAtFA
- Uzo chibara oke (@FAccordions) February 21 2020
Ama m #Brad Pitt ezigbo iwe were mgbe akpọrọ ya “nwoke nwere ọgụgụ isi nke amamihe” nke gbara afọ asaa ya na ọrịa dementia nke na-enweghị ike ikwu okwu site na oghere ọjọọ ahụ na ihu ala ya.
M pụtara, m ga-enwe.
- Nnukwu onye na - achụ nta ezì (@hunterofswine) February 21 2020
M ka hụrụ gị n'anya, #Brad Pitt pic.twitter.com/peSlvZaxO9
- elMelissa🌸🌷 (@doordecorby) February 21 2020
Mgbe Ronaldo na-ekwu banyere Mbappé - La Quotidienne # 642 - VIDIO
PSGkwụ PSG - PSG: Sarri karịa Allegri iji dochie Tuchel na Paris? - FOOTBALL 01